India: Fanolanana Ao Haryana Niteraka Diabe Ho Fanoherana Ny Herisetra · Global Voices teny Malagasy
India: Fanolanana Ao Haryana Niteraka Diabe Ho Fanoherana Ny Herisetra
Voadika ny 02 Desambra 2012 11:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Português, 한국어, English
Diabe Miaraka amin'ny labozia ao Hisar, Haryana, India Hatsaram-pon'i Asha Kowtal, Dalitweb.org
Tao anatin'ny volana vitsivitsy izay dia nanjary toy ny mahazatra ny naheno resaka fanolanana tao amin'ny fanjakana Indiana ao Haryana.
Nanamarika an'i Haryana ho “renivohitry ny fanolanana ao India” tamin'ny volana Oktobra,ny Deccan Chronicle, ao amin'ny lahatsoratra nitondra ny lohateny hoe ‘The Haryana horrors‘ [Ny Horohoron'i Haryana] noho ny nitaterana fisiana fanolanana 19 tao anatin'ny iray volana. Noho ny fisian'izany fanaovana an-keriny izany dia notolora-kevitra tsy hankany amin'ny pub [karazana bar], tsy hampiasa finday ary tsy hanao “jeans” ny vehivavy.
Araka ny voasoratra ao amin'ny Tehelka, nitombo avy roa heny ny fisiana fanolanana tao Haryana tao anatin'ny fito taona. Mbola 386 izany tamin'ny 2004, nitsambikina nankany amin'ny 733 izany tamin'ny 2011.
Tsikaritra fa lasibatry ny mpanolana kokoa ny vehivavy Dalit [saranga ambany indrindra]. Nilaza ny International Dalit Solidarity Network (IDSN) [Tambajotram-Piaraha-mientana Dalit Iraisampirenena] fa “ny vehivavy Dalit no marefo indrindra amin'ny heloka bevava tahaka izao.” Ankoatra izany, araka ny nambaran'ny IDSN ny 90 isan-jaton'ny heloka bevava atao amin'ny vehivavy Dalit dia tsy voatatitra noho ny fanahiana amin'izay fiantraikany ara-tsosialy sy ho fiarovana manokana momba azy.
Nandefa iraka hijery ny zava-misy any Haryana ny mpikatroka Dalit ary nanomana diabe. Nanomboka ny voalohany Novambra 2012 no nanomana Karwan [Diabe] naharitra sivy andro hanavatsava tanàna sy tanandehibe any Haryana antsoina hoe Dalit Mahila Garima Yatra (Diabe ho amin'ny hambom-pom-behivavy Dalit) hihaona amin'ny niharan'ny fanolanana, manampahefana ary ny fokonolona. Nolazain-dry zareo ny “Firaisankina amin'ny niharan'ny fanolanana sy ny fahatezerana manoloana ny fampidirana ho rafitra ny herisetra ara-pananahana amin'ny vehivavy Dalit.” Hoy i Asha Kowtal ao amin'ny Savari (pejy facebook ho an'ny vehivavy adivasi, bahujan ary dalit):
Tezitra avokoa isika eo anatrehan'ny fomba fanao ary, mazava loatra, mampahatsiaro indray ny anjara andraikitsika kely amin'ny tolon'ny vondro-piarahamonintsika. Matetika sika no manao fahadisoana manome tsiny ny tenantsika ihany, saingy mampiseho antsika ny lalana handrosoana ny mahita ny fiarahamonina sy ireo niharan'ny fanolanana miraviravy tanana
Mpanao diabe eo an-tokotanin'ny biraon'ny tanàna kely iray, Haryana, India Hatsaram-pon'i Asha Kowtal
Misy angona valinteny avy amin'ny mpikatroka Dalit azo jerena ao amin'ny Dalit Web. Misy sarin'ny diabe ihany koa mivoaka ato.
Kalpana Sharma, mpanao matoandahatsoratra, nanoratra tao amin'ny The Hindu, ary notsongain'ny New York Times ny filazany hoe, “Raha vehivavy mahantra ianao no voaolana, tsy azonao eritreretina ny fiainana fa hisy ny rariny,” nampiany hoe “Raha vehivavy mahantra ianao no sady Dalit, dia mbola manify kokoa ny vintana hisian'ny rariny.”
Nampakatra lahatsary ao @YouTube http://youtu.be/oWYkzwbr-9I?a iresahan'i Asha Kowtal amin'ny antsipirihany ny trangana fanolanana dalit ao Haryana
Namono tena ny roa voampanga taorian'ny fanolanana itambarambe iray